कोरोना संक्रमणको त्रासकाबीच असुरक्षित मापसे जाँच : शैली बदल्न सुझाव – Nepal Japan
कोरोना संक्रमणको त्रासकाबीच असुरक्षित मापसे जाँच : शैली बदल्न सुझाव
नेपाल जापान २३ फाल्गुन १५:०६
विश्वभर फैलिएको कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट बच्न माक्र्स प्रयोग गर्नु सबभन्दा सुरक्षित उपाय हो तर राजधानी लगायत देशका प्रमुख शहरहरुमा दैनिक जसो साँझपख प्रहरीले मापसे (मादपक पदार्थ सेवन गरेर सवारी चलाएको) जाँच गर्ने गर्दछन् ।
व्यक्तिका जीवन रक्षाको हकमा यो एकदमै सकारात्मक काम भए पनि अहिले कोरोनाको संक्रमणका त्रास फैलिइरहेका बेला प्रहरीले भीडमा माक्स खोलेर सास फेर्न लगाउनु असुरक्षित भएको यात्रुहरुको गुनासो छ ।
माक्स खोलेर मापसे जाँच गराउँदा संक्रमणकाको त्रास बढेको यात्रुहरुले गुनासो गर्न थालेका छन् । दर्जन बढी मोटरसाइकललाई एकैपटक रोकेर माक्स खोल्न लगाएर सास फेर्न लगाउँदा यसको असर प्रहरीलाई र चालकलाई निश्चित रुपमा पर्ने देखिएको छ ।
साँझ प्रहरीहरु मेसिन लिएर मोटरसाकललाई रोकि माक्स खोल्न लगाएर चालकलाई मेसिनमा फुक्न लगाइरहेका छन् । एक यात्रुले बीचैमा भने “माक्स नखोल्दा नै राम्रो होला नि” ! तर प्रहरीले किन टेर्थे “माक्स त खोल्नैपर्छ, खोल्नुस्” भने । साँझ सुरक्षा जाँचमा बसेका प्रहरीसंग बढी तर्क गर्नुको अर्थ थिएन । उनले माक्स खोले, मेसिमा फुके प्रहरीले जानुस् भने गए ।
पालो अर्कोको आयो, उनले पनि त्यसै भने “माक्स नखोल्दा राम्रो नि, बरु धेरैपटक फुक्छु माक्स खोल्दिन ।” प्रहरीले मानेनन् । मापसे जाँच सकिएपछि त्यहाँ एकछिन छलफल नै चल्यो । जाँच गरिसकेकाहरु प्रहरीसंग छलफलमा लागे ।
सबैको आग्रह थियो- यस्तो आपतको बेला छ तपाईहरुको पनि सुरक्षाको सवाल होला ? यसरी हामीलाई भीडमा माक्स खोल्न लगाएर मापसे जाँच्नु भएन । बरु यसको अर्को बिधि खोज्नुहोस् ।
प्रहरीको आफ्नै बाध्यता । उनीहरु “कुरा सबै ठीक हो तर हामीले यहाँ के नै गर्न सक्छौं र !” भन्दै निरीहता प्रकट गरे ।
बीचैमा एकजनाले उत्तर दिए- “मापसे गरे नगरेको मेसिनमा सास फेर्न लगाउने हैन अब बाइकबाट ओरालेर १० मिटर जति पैदल हिंडाउने, उसको हिडाइको चालबाटै थाहा हुन्छ मापसे छ कि छैन भनेर ? तर प्रहरीको निरीहता उस्तै, “कहाँ हुन्छ हजुर त्यसरी हामीलाई जस्तो आदेश आउँछ त्यस्तै गर्ने हो । कोरोनाको डर त हामीलाई पनि छ नि” !
अहिले कोरोनाले जसरी त्रस्त बनाइरहेको छ मापसे जाँचले असुरक्षा बढाएको यात्रु र प्रहरीकै गुनासो छ । मापसे जाँच रोक्नु पर्छ भन्नेमा कसैको पनि सहमति नहोला तर अहिलेको शैलीमा जाँच गर्दा यसले जोखिम मात्र बढाइरहेको छ । सरकारले माक्र्सभित्रैबाट फु गर्दा मापसे छ कि छैन भनेर पत्ता लगाउने यन्त्रको तत्काल प्रबन्ध गरेमा सबैको भलो हुने थियो ।
यदि त्यसो गर्न सकिंदैन भने मापसे शैली बदल्नुपर्छ । कसरी कोरोनाको सम्भावित संक्रमणबाट पनि बचिने र मापसे गरेका पनि उम्कन नपाउने भन्ने विधि खोज्नैपर्छ । यसलाई ढिला गर्नु हुँदैन ।
अझ कतिपय स्थानमा त प्रहरीले मुखैमा गएर सास फेर्न लगाउँछ । यो झन डरलाग्दो स्थिति छ । सुरक्षा जाँचको नाममा प्रहरी र चालक दुबैकोा स्वास्थ्यलाई असर गर्ने गरी जाँच गर्नु मानवताका दृष्टिले पनि उपयुक्त मानिंदैन । जाँच नै गर्ने हो भने अहिलेको त्रास हटाउने गरी त्यस्तै उपकरणको सहायता लिनु आवश्यक छ । नत्र मापसे जाँचकै कारण संक्रमण नफैलेला भन्न सकिन्न ।